“Waxaa hubaal ah inay jiraan ciyaartoy qaar ee ciyaaray kulankoodii ugu dambeeyay kooxda Man United” – Tababare Solskjær – Gool FM
(England) 06 Maajo 2019. Tababaraha reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa iska diiday inuu xaqiijiyo in Alexis Sanchez uu ka tagayo garoonka Old Trafford dhamaadka xili ciyaareedkan.
Hadalka tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu imaanayaa kaddib kulankii horyaalka Premier League ay barbaraha 1-1 la galeen kooxda Huddersfield.
Alexis Sanchez ayaa ku soo bilaawday shaxda Manchester United uu tababare Solskjær kaga hortahay kooxda Huddersfield, balse nasiib daro wuxuu ciyaarta kaga baxay sababa la xiriira dhaawac soo gaaray.
Ciyaarta kaddib ayaa la weydiiyay macalinka reer Norway suurtagalnimada uu Alexis Sanchez kaga dhaqaaqi karo kooxda Manchester United dhamaadka xili ciyaareedkan, wuxuuna kaga jawaab celiyay.
“Ma doonayo inaan wax magac ah halkan ka sheego, laakiin waxaa hubaal ah, inay jiraan ciyaartoy qaar ee ciyaaray kulankoodii ugu dambeeyay ee kooxda Manchester United”.
Si kastaba tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa isku diyaarinaya in isbedel weyn uu ku sameeyo safka Manchester United bilowga suuqa kala iibsiga ee xagaaga, waxaana la filayaa inay baxaan dhowr ciyaartoy ee haatan kooxda ka tirsan oo ay hogaaminayaan Pogba iyo Romelu Lukaku.
Sanchez ayaa sidoo kale halis ugu jira inuu ka tago kooxda Manchester United, marka loo fiiriyo mushaarka xoogan uu kooxda ka qaato, taasoo dhibaato badan ku abuurtay saraakiisha maamusha garoonka Old Trafford.